Matahora ny Magicien voarohirohy amin'ny tranofiara ho an'i 'The Black Phone' an'i Scott Derrickson - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Matahora ny Magicien voarohirohy amin'ny tranofiara ho an'i 'The Black Phone' an'i Scott Derrickson
Matahora ny Magicien voarohirohy amin'ny tranofiara ho an'i 'The Black Phone' an'i Scott Derrickson
Joe Hill sy Scott Derrickson
by Trey Hilburn III Oktobra 13, 2021 3,320 hevitra
Fampisehoana lehibe manaraka an'i Blumhouse Ny finday mainty dia miorina amin'ny tantaran'i Joe Hill ary natombok'i C. Robert Cargill sy Scott Derrickson. Fampisehoana mampatahotra izay mamerina antsika amin'ny tahotra fakana an-keriny tamin'ny taona 70 sy 80. Ny fampihorohoroana lehibe izay nilaza fa ny zanakao dia mety ho avy eo alaina.
Tsara vintana izahay nahita Ny finday mainty ao amin'ny Fantastic Fest ary tena tianay izany. Hamarino tsara fa jereo ny fanadihadianay. Azo antoka fa zavatra hihemoran'ity mpijery ity. Mampatahotra ary maizina be.
Ny synopsis ofisialy ho an'ny Ny finday mainty mandeha toy izao:
Finney Shaw, tovolahy saro-kenatra nefa hendry 13 taona, nalaina an-keriny tamina mpamono olona mahatsikaiky ary voafandrika tao ambany rihana tsy misy feo ary tsy misy dikany firy ny kiakiaka. Rehefa manomboka miantso ny telefaona tapaka eo amin'ny rindrina, dia hitan'i Finney fa henony ny feon'ireo niharam-boina teo alohan'ilay mpamono olona. Ary efa maty paika izy ireo amin'ny fanaovana antoka fa tsy hitranga amin'i Finney ny nanjo azy ireo.
Ethan Hawke dia milalao mpanao majia very saina amin'ny van mainty amin'ity iray ity ary mampihoron-koditra izany ho an'ny lehilahy iray izay tsy milalao olon-dratsy matetika. Raha ny marina dia mahatalanjona ny mpilalao rehetra amin'ity iray ity.
Miomàna handray ny The Black Phone hidina amin'ny sinema amin'ity 4 Febroary ity.